ချိုသာသောစျေးနှုန်းဖြင့် China Wifi App Control Blue Tooth Cabinet Lock ထုတ်လုပ်သူ - Zhechi Electric
နောက်ဆုံးပေါ်စျေးပေါသော Wifi App Control Blue Tooth Cabinet Lock ပေးသွင်းသူများ
Wifi App Control Blue Tooth Cabinet Lock ၏ နိဒါန်း
Wifi App Control Blue Tooth Cabinet Lock သည် 2020 ခုနှစ်တွင် Udohow ၏နောက်ဆုံးပေါ်စမတ်အပြာရောင်သွားများထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏တံခါးသော့ခတ်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ရိုးရှင်းသောအသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းနှင့်အဆင်ပြေသောအက်ပ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ပါရှိသည်။ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းမှတဆင့် သော့ဖွင့်ခြင်း။ ၎င်းသည် စမတ်ကျသောဘဝ၏ အံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံကို ယူဆောင်လာမည်ဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး ၎င်းသည် စျေးကြီးသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသော့များကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအစား လော့ကာနှင့် ဗီရိုအတွက် မြင့်မားသောလုံခြုံရေးနှင့် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည်။
၎င်းတွင်အဆင်ပြေသောစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်သော့ဖွင့်ရန်နည်းလမ်း3ခုပါရှိသည် - APP Unlock၊ PIN Code လော့ခ်ဖွင့်ခြင်း၊ Card Unlock ။ ကက်ဘိနက်လော့ခ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သင့်လိုအပ်ချက်အားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့် APP စီမံခန့်ခွဲမှုဖြင့် သင့်စမတ်ဖုန်းသို့ စမတ်သော့ကို ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် Blue tooth မှတစ်ဆင့်၊
Wifi အက်ပ်ထိန်းချုပ်မှု Blue Tooth Cabinet Lock ၏လုပ်ဆောင်ချက်
1. မတူညီသောရွေးချယ်စရာများအတွက် ကိုယ်ထည်နှင့် panel အတွက် ခွဲခြမ်းပုံစံဒီဇိုင်း
3. Touch pad ခလုတ် ဒီဇိုင်း၊ စကားဝှက်သည် ဂဏန်း4လုံးမှ 15 လုံး ပါဝင်နိုင်ပြီး၊ စကားဝှက် ဘီလီယံပေါင်းများစွာ ရနိုင်သည်
4. စကားဝှက်ကို အသုံးပြုသူများက သတ်မှတ်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ပါဝါပိတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် အလွတ်ကျက်နိုင်သည်။
5. AA ဓာတ်ခဲ4လုံး အကြိမ် 10,000 အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အလိုအလျောက် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှု သတိပေးသည်။
6. Anti-Theft Technology နှင့် Fake PIN စကားဝှက် လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
7. စကားဝှက် လုပ်ဆောင်ချက်ကို မှားယွင်းထည့်သွင်းသည့်အခါ အလိုအလျောက် အချက်ပေးစနစ်ကို အသက်သွင်းမည်ဖြစ်သည်။
8. အများသူငှာနှင့် ပုဂ္ဂလိကမုဒ်အကြား လွတ်လပ်စွာပြောင်းပါ။
9. အမျိုးမျိုးသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုပံ့ပိုးနိုင်သည်၊ အထူးလုပ်ဆောင်ချက်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
hot Tags:: Wifi အက်ပ်ထိန်းချုပ်ရေး Blue Tooth Cabinet လော့ခ်